Muxuu ka yiri Gerrard awoodda ciyaareed ee kooxda Liverpool & qaar ka mid ah xiddigaheeda? – Gool FM
(Liverpool) 13 Okt 2019. Halyeeyga kooxda Liverpool ee Steven Gerrard ayaa amaanay qaab ciyaareedka Reds uu hogaaminayo tababare Jürgen Klopp ay haatan ka sameeneyso dhamaan tartamada kala duwan ay qeybta ka tahay.
Haddaba Steven Gerrard ayaa wareysi uu ku bixiyay website-ka rasmiga ah ee kooxda Liverpool ayaa wuxuu yiri:
“Kooxda ayaa si cajiib ah shaqo u soo qabtay labadii sanno ee la soo dhaafay, kaddib markii uu Klopp ugu dambeyntii adeegsaday falsafadiisa”.
“Hada ku raaxayso daawashada kooxda, mar walbana waxaan aaminsanahay inay guuleysan doonaan iyadoon loo eegeyn kooxda ka soo horjeedda, ha noqoto inay ka ciyaarayaan Champions League ama Premier League”.
“Liverpool waxay haysataa seddex weerar ee soo bandhigaya qaab ciyaareed heer sare ah oo aan la joojin karin mararka qaarkood”.
“Virgil van Dijk wuxuu isbadal weyn ku sameeyay kooxda, oo ay ku jiraan goolhayeyaasha iyo ciyaartoyda kaleba”.
“Waa koox weyn, waxay ixtiraam ka heleen taageerayaasha hadana waxay hogaaminayaan horyaalka Premier League, laakiin waan hubaa in aniga iyo Klopp aan isku fikir nahay, wuxuu u fikirayaa isla sidan oo kale, wuxuu isku dayayaa kaliya inuu wada guuleysto kulamada soo socda”.